အောင်မြင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတွေမှာ ဘယ်အချက်တွေက အားသာနေသလဲ၊ ဘာကြောင့်အောင်မြင်သလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေနဲ့အတူ ယခုဖော်ပြချက်တွေဟာလည်း သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းသစ်စတင်မှု၊ လက်ရှိလုပ်ငန်းအောင်မြင် တိုးတက်မှုအတွက် လုပ်ငန်း အောင်မြင်ရေး လမ်းညွှန်ချက်တွေဖြစ်မှာပါ။ အောင်မြင်နေသော နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းများ၏ အဓိကတိုင်းတာသည့် လုပ်ငန်းဆန်းစစ် မှုနှုန်းများနှင့် UN အဖွဲ့အစည်းများ မှတဆင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံတိုင်းတာမှု အဓိက ဆန်းစစ်ချက်များအား စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းများနှင့် SMEs လုပ်ငန်းများအတွက် ပြန်လည်ကိုးကားပြီး အထောက်အကူပြုဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။ လက်ရှိစီးပွားရေးစတင်ဖန်တီးသူ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းများဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုဖော်ဆောင်နေသူ SMEs လုပ်ငန်းများ ဖြစ်စေ ယခုအချက်များဟာ မဖြစ်မနေ တိုင်းတာဆောင်ရွက်သင့်ပြီး အဓိကဦးစားပေးရမဲ့ အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၁) သင်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအား ရေရှည်ရည်ရွယ်ချက်များ၊ မျှော်မှန်းချက်များကို အသေးစိတ်ချမှတ်ရေးဆွဲထားပြီးပြီလား။ ???
(၂) ခေတ်ပြိုင်နဲ့အညီ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအား ယခင်နှင့်မတူညီသည့် ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲမှုများ ရှိပြီးပြီလား။ ???
(၃) သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အဓိက စံထားသည့်သူ (သို့) အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်သူများအားသို့ ချဉ်းကမ်းရယူမှုရှိပြီးပြီလား။ ???
(၄) မိမိလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သင်တန်းများ၊ အသိပညာများ သိရှိတက်ရောက်ထားမှု ရှိပြီးပြီလား။ ???
(၅) လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံများကို တခြား R&D, Competitor, Supplier, Customer များထံမှ လေ့လာမှုရှိပြီးပြီလား။ ???
(၆) လုပ်ငန်းတိုးတက်ရန် သက်ဆိုင်သည့် NGO, Association အသင်းများ, ၀န်ကြီးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီးပြီလား။ ???
(၇) နိုင်ငံခြားတွဲဖက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် (JV) အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကြိုတင်တွက်ဆထားပြီးပြီလား။ ???
(၈) ပြင်ပလုပ်ငန်းများတွင် လိပ်စာကဒ်၊ အီးမေး၊ Facebook၊ စာစောင်၊ Website စတဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမှု ရှိထားပြီးပြီလား။ ???
(၉) သင့်လုပ်ငန်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းကြောင်း ချိတ်ဆက်နေသည့် (B2B Link) လုပ်ငန်းချိတ်ဆက်မှုများ ရှိပြီးပြီလား။ ???
(၁၀) မိမိလုပ်ငန်းအား ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်မည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားမှုရှိပြီးပြီလား။ ???
ခေတ်ပြိုင်စီးပွားရေးဖြစ်လာရင် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ မဟာဗျူဟာဖော်ဆောင်နိုင်မှု နဲ့အတူ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ပြည့်ဝမှုတွေဟာ အခြေခံကြောရိုးမဖြစ်လာပြီး၊ မိမိရဲ့ဖောက်သည်တွေရဲ့ ရေရှည်ခိုင်မာမှု ဟာလည်း အဓိကအသက်သွေးကြောပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်လာလေလေ၊ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရမဲ့ လုပ်ငန်းတွေဟာလည်း အလိုက်သင့်ဖန်တီးပေးရမှာဖြစ်လို့ ယခုဖော်ပြထားတဲ့ မေးခွန်းများကို သေချာသုံးသပ်ပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမို တိုးတက် အောင်မြင်ရေးအတွက် အကြံပြုရေးသား ဖော်ပြပေးလျှက်။ ဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးမည်။
စာရေးသူ - စီးပွားရေးအကြံပေး - ဦးဇင်ဖြိုးပိုင်
(Founder, www.EntrepreneurSME.com) www.EntrepreneurSME.com စီးပွားရေးဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဘ၀အောင်မြင်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ စွန့်ဦးတီထွင်မှု၊ ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ၀န်ထမ်းရေးရာ၊ ငွေကြေး၊ စတော့ရှယ်ယာ၊ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေး၊ မြန်မာ့စီးပွားရေး စတဲ့ (ခေါင်းစဉ်အမျိုးအစားပေါင်း - ၁၀၀ ကျော်) အား (အခမဲ့) ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါပြီ။ (အဖွဲ့ဝင်များအတွက် အပတ်စဉ် အီးမေးမှတဆင့် Update ပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ)